ဟဒီးဆ်: မည်သူမဆို (မိမိခေါင်းဆောင်၏) အမိန့်နာခံမှုကို စွန့်လွှတ်ကာ မွတ်စ်လင်မ်တို့၏ ဂျမာအသ်မှ ခွဲထွက်ပြီး သေဆုံးခဲ့ပါက ထိုသူသည် အစ္စလာမ်မတိုင်မီ အမိုက်ခေတ်၏သေခြင်းမျိုးဖြင့် သေဆုံးခြင်းဖြစ်သည်။ မည်သူမဆို (အမှားအမှန် ခွဲခြားနိုင်ခြင်းမရှိသော) မျက်ကန်းမျိုးချစ် အလံအောက်မှ လူမျိုးစွဲဖြင့် အမျက်ထား တိုက်ခိုက်မည်။ သို့မဟုတ် လူမျိုးစွဲထားရန် ဖိတ်ခေါ်မည်။ သို့မဟုတ် လူမျိုးစွဲထားခြင်းကို အကူအညီပေးပြီး အသတ်ခံရပါက ထိုသူသည် အစ္စလာမ်မတိုင်မီ အမိုက်ခေတ်၌ အသတ်ခံရခြင်းမျိုးဖြင့် အသတ်ခံရခြင်းဖြစ်သည်။ - တမန်တော်မြတ်(ﷺ)၏ ဟဒီးဆ်ဩဝါဒတော် ဘာသာပြန် စွယ်စုံကျမ်း
ဟဒီးဆ်: မည်သူမဆို (မိမိခေါင်းဆောင်၏) အမိန့်နာခံမှုကို စွန့်လွှတ်ကာ မွတ်စ်လင်မ်တို့၏ ဂျမာအသ်မှ ခွဲထွက်ပြီး သေဆုံးခဲ့ပါက ထိုသူသည် အစ္စလာမ်မတိုင်မီ အမိုက်ခေတ်၏သေခြင်းမျိုးဖြင့် သေဆုံးခြင်းဖြစ်သည်။ မည်သူမဆို (အမှားအမှန် ခွဲခြားနိုင်ခြင်းမရှိသော) မျက်ကန်းမျိုးချစ် အလံအောက်မှ လူမျိုးစွဲဖြင့် အမျက်ထား တိုက်ခိုက်မည်။ သို့မဟုတ် လူမျိုးစွဲထားရန် ဖိတ်ခေါ်မည်။ သို့မဟုတ် လူမျိုးစွဲထားခြင်းကို အကူအညီပေးပြီး အသတ်ခံရပါက ထိုသူသည် အစ္စလာမ်မတိုင်မီ အမိုက်ခေတ်၌ အသတ်ခံရခြင်းမျိုးဖြင့် အသတ်ခံရခြင်းဖြစ်သည်။
အမျိုးအစား: ဒအ်ဝဟ်နှင့် ဟိစ်ဗဟ်။ . အစ္စလာမ့် နိုင်ငံရေး။ . ‘အိမာမ်’ခေါင်းဆောင်အောက်မှ ခွဲထွက်ခြင်း။ .
အဗူဟုရိုင်ရဟ် (ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟု)က ဆင့်ပြန်ခဲ့သည်။ တမန်တော်မြတ် (ဆွလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)မိန့်ကြားတော်မူသည်။ မည်သူမဆို (မိမိခေါင်းဆောင်၏) အမိန့်နာခံမှုကို စွန့်လွှတ်ကာ မွတ်စ်လင်မ်တို့၏ ဂျမာအသ်မှ ခွဲထွက်ပြီး သေဆုံးခဲ့ပါက ထိုသူသည် အစ္စလာမ်မတိုင်မီ အမိုက်ခေတ်၏သေခြင်းမျိုးဖြင့် သေဆုံးခြင်းဖြစ်သည်။ မည်သူမဆို (အမှားအမှန် ခွဲခြားနိုင်ခြင်းမရှိသော) မျက်ကန်းမျိုးချစ် အလံအောက်မှ လူမျိုးစွဲဖြင့် အမျက်ထား တိုက်ခိုက်မည်။ သို့မဟုတ် လူမျိုးစွဲထားရန် ဖိတ်ခေါ်မည်။ သို့မဟုတ် လူမျိုးစွဲထားခြင်းကို အကူအညီပေးပြီး အသတ်ခံရပါက ထိုသူသည် အစ္စလာမ်မတိုင်မီ အမိုက်ခေတ်၌ အသတ်ခံရပြီး သေဆုံးသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ အကြင်သူသည် ငါ၏အွမ္မသ်သားတို့ကို ဆန့်ကျင်ပုန်ကန်ပြီး လူကောင်းဖြစ်စေ လူဆိုးဖြစ်စေ အားလုံးကို တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်မည်။ မုအ်မင်န် ယုံကြည်သူများကို ရှောင်ရှားခြင်းလဲမရှိ၊ (အသက်ကို ကာကွယ်မှုပေးရန်) ကတိကဝတ် ပြုထားသူများ၏ ကတိကိုလည်း လိုက်နာစောင့်ထိန်းခြင်းလဲမရှိခဲ့ပါက ထိုသူသည် ငါကိုယ်တော်၏ နောက်လိုက် မဟုတ်သလို ငါကိုယ်တော်သည်လည်း ထိုသူနှင့် မသက်ဆိုင်ပေ။
ဟဒီးဆ်တော်၏ ဆိုလိုရင်းမှာ အကြင်သူသည် မွတ်စ်လင်မ်တို့၏ ဂျမာအသ်မှခွဲထွက်မည်။ ထိုဂျမာအသ်သည် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြင့် မိမိတို့၏စုစည်းညီညွတ်မှုကို တည်ဆောက်ထားပြီး ၎င်း၏အမိန့်ကိုနာခံရန် သဘောတူထားကြသည်။ ထိုခေါင်းဆောင်ဖြင့် ၎င်းတို့အချင်းချင်း စုစည်းညီညွတ်ကြသည်။ ထိုခေါင်းဆောင်က ၎င်းတို့၏ ရန်သူများမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ ထို့အတူ မွတ်စ်လင်မ်တို့၏ အရေးကိစ္စများကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးသော အာဏာပိုင်၏ အမိန့်နာခံမှုမှ ခွဲထွက်ပြီး ထိုအခြေအနေမျိုး၌ပင် သေဆုံးခဲ့ပါက ထိုသူသည် အစ္စလာမ်မတိုင်မီ အမိုက်ခေတ်ရှိသူများ သေဆုံးသကဲ့သို့ သေဆုံးသွားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ထိုခေတ်ကာလ၌ ရှိသူများတွင် (အိမာမ်) ခေါင်းဆောင်ဟူ၍ မရှိဘဲ တကွဲတပြားဖြစ်နေကြသည်။အကြင်သူသည် ဂိုင်းဂဏစွဲနှင့် လူမျိုးရေးဝါဒစွဲကြောင့် တိုက်ခိုက်သော သူများကဲ့သို့ အကြောင်းအရင်း တိကျခိုင်မာမှုမရှိဘဲ အမှားအမှန်မကွဲပြားသော အလံအောက်မှ တိုက်ခိုက်မည်။ လူမျိုးစွဲကြောင့် အမျက်ဒေါသထားမည်။ သို့မဟုတ် လူမျိုးစွဲထားရန် ဖိတ်ခေါ်မည်။ သို့မဟုတ် လူမျိုးစွဲထားခြင်းကို အကူအညီပေးမည်။ ၎င်း၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ အကြင်သူသည် မိမိစိတ်အလိုဆန္ဒကြောင့် ဒေါသထားကာ လူမျိုးစွဲဖြင့် မိမိစိတ်အလိုနောက်လိုက်၍ တိုက်ခိုက်သူဖြစ်သည်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ အကြင်သူသည် မွတ်စ်လင်တို့ကို ဆန့်ကျင်ပုန်ကန်ပြီး လူကောင်းဖြစ်စေ၊ လူဆိုးဖြစ်စေ၊ မွတ်စ်လင်ဖြစ်စေ၊ ထိုနယ်မြေ၌ နေထိုင်သူ ဘာသာခြားကိုဖြစ်စေ၊ အစ္စလာမ့်နိုင်ငံတွင် ဂျိဇ်ယဟ် (အခွန်)ပေးဆောင်၍ နေထိုင်သူ (ဇင်မ္မီ)ကိုဖြစ်စေ အားလုံးကို တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်မည်။ ထို့အပြင် မိမိ၏ မတရားသည့် လုပ်ရပ်များအပေါ် ဂရုစိုက်ခြင်းမရှိ၊ ထိုလုပ်ရပ်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ဆိုးကျိုးနှင့် ပြစ်ဒဏ်များကိုလည်း ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိပါက ထိုကဲ့သို့သော သူမျိုးနှင့် တမန်တော်မြတ် (ဆွလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)သည် မည်သို့မျှ မသက်ဆိုင်ပေ။
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ အမိန့်တော်အား ဖီဆန်သည့် ကိစ္စမျိုးမှလွဲ၍ ကျန်ကိစ္စများတွင် အာဏာပိုင် ခေါင်းဆောင်များ၏ အမိန့်ကိုနာခံရန် တာဝန်ရှိသည်။
မွတ်စ်လင်မ်တို့အား ပုန်ကန်သူ၊ ခေါင်းဆောင်၏ အမိန့်ကိုမနာခံသူ၊ မွတ်စ်လင်မ် ဂျမာအသ်မှ ခွဲထွက်သူများနှင့် ပတ်သက်၍ ဤဩဝါဒတော်တွင် ပြင်းပြင်းထန်ထန် သတိပေးခြိမ်းခြောက်ထားသည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည် ထိုအခြေအနေမျိုး၌ပင် ကွယ်လွန်ခဲ့ပါက အစ္စလာမ်မတိုင်မီ အမိုက်ခေတ်ရှိသူများ၏ လမ်းစဉ်ပေါ်တွင် သေဆုံးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ တစ်ဦးတစ်ယောက်သည် မွတ်စ်လင်မ် ဂျမာအသ်မှ ခွဲထွက်သွားသော်လည်း ၎င်းသည် မွတ်စ်လင်မ်တို့အား ပုန်ကန်ခြင်း၊ တိုက်ခိုက် သတ်ဖြတ်ခြင်းများ မပြုလုပ်ပါက ကျွန်တော်တို့သည် သူ့အား မွတ်စ်လင်မ် ဂျမာအသ်ထဲသို့ ပြန်ရောက်လာစေရန်နှင့် ခေါင်းဆောင်၏ အမိန့်ကိုနာခံလာစေရန် အတွက် တိုက်ခိုက်ခြင်းမျိုး မပြုသင့်ဘဲ ၎င်းအား သူ့အခြေအနေအတိုင်းပင် ထားလိုက်ရမည်။
အမိန့်နာခံခြင်း၊ ဂျမာအသ်နှင့်အတူရှိနေခြင်းတို့တွင် ကောင်းခြင်းများ၊ လုံခြုံစိတ်ချရမှု၊ စိတ်နှလုံး အေးချမ်းမှုနှင့် အခြေအနေကောင်းများ ရှိသည်။
ဒအ်ဝဟ်နှင့် ဟိစ်ဗဟ်။ . အစ္စလာမ့် နိုင်ငံရေး။ . ‘အိမာမ်’ခေါင်းဆောင်အောက်မှ ခွဲထွက်ခြင်း။ .
အမှန်ပင် အသင်တို့အပေါ်ဝယ် ခေါင်းဆောင်အချို့အား ခန့်အပ်ခြင်းခံရလိမ့်မည်။ အသင်တို့သည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ရပ်အချို့ကို လက်ခံကြပြီး အချို့ကို ငြင်းပယ်ကြလိမ့်မည်။ အကြင်သူသည် (၎င်းတို့၏ မကောင်းသောလုပ်ရပ်များကို) မုန်းတီးပါက အပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်သည်။ အကြင်သူသည် (ထိုမကောင်း သောလုပ်ရပ်အား) ငြင်းပယ်ပါက ငြိမ်းချမ်းသူဖြစ်သည်။ သို့သော် အကြင်သူသည် ယင်းမကောင်းသောလုပ်ရပ်များကို ကျေနပ်နှစ်သက်ပြီး ၎င်းတို့နောက်သို့လိုက်ပါက ၎င်းတို့ကဲ့သို့ပင် (ပျက်စီးသွားမည်)ဖြစ်သည်။ သာဝကကြီးများက အို-အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ရစူလ်တမန်တော် ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းတို့အား စစ်တိုက်ရမည်မဟုတ်လောဟု လျှောက်ထားမေးမြန်းခဲ့ရာ ကိုယ်တော်က မိန့်တော်မူသည်မှာ ၎င်းတို့သည် အသင်တို့ထဲတွင် ဆွလာသ်ဆောက်တည်နေသရွေ့ ၎င်းတို့အား စစ်မတိုက်ကြလေနှင့်။
အသင်တို့၏ကိစ္စအဝဝသည် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး၏ ဦးဆောင်မှုအောက်တွင် တညီတညွတ်တည်းရှိနေသည့်အခါတွင် တစ်ဦးတစ်ယောက်က အသင်တို့၏ စုစည်းညီညွတ်မှုအား ပြိုကွဲစေရန်နှင့် အသင်တို့၏အုပ်စုအား အကွဲကွဲအပြားပြားဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရောက်ရှိလာပါက သင်တို့သည် ၎င်းသူအား သတ်ဖြတ်ကြလေကုန်။